"एनी फ्रान्कको डायरी" पुस्तकसँग विवादास्पद वर्तमान साहित्य
«एनी फ्रान्कको डायरी the पुस्तकसँग विवादहरू
कारमेन गुइलन | | किताबहरु, साहित्य, हाम्रो बारेमा
पुस्तक "अना फ्रान्कको डायरी" यसको नायकको जीवनको एकदम क्रूर वास्तविक कथा हुनुको साथै, यसले केहि समयदेखि निश्चित विवादहरू उत्पन्न गरिरहेको छ। तपाईको "विवाद" को कारण के हो? विशेष रूपमा, काम गर्ने हुनै पर्छ कि रक्षा गर्नेहरु बीच एक कानूनी विवाद free प्रतिलिपि अधिकार (यस हालको वर्ष, २०१ 2016 को रूपमा) र एनी फ्रान्क कोष स्विट्जरल्याण्डमा बासेलको, जसले पुस्तकको उत्सर्जन अधिकारहरूको वैधता दावी गर्दछ।
यो बलको साथ यो पुष्टि गर्न यस जगले के पकड गर्छ? उनका अन्तिम भनाइहरूमा, जहाँ उनीहरूले अन्ततः त्यो पहिचान गरे ओटो फ्र्या Frank्क, एनी फ्रान्कका बुबा, त्यस्ता लेखनका सह-लेखक थिए र सम्पादक मात्र थिएनन् जुन अहिले सम्म थाहा थियो। त्यसकारण, प्रतिलिपि अधिकार यस वर्षको म्याद सकिदैन। नेदरल्याण्ड्समा लागू कानून अनुसार, कामको प्रतिलिपि अधिकार लेखकको मृत्यु पछि 70० बर्ष पछि समाप्त हुन्छ। यदि हामी हिसाब गर्छौं भने, मार्च १ 1945 .1980 मा जर्मन एकाग्रता शिविर बर्गेन-बेलसेनमा एनी फ्रान्कको मृत्यु भयो। तर उनका बुबा ओटो फ्रान्कको १ XNUMX in० मा मृत्यु भयो। यसै कारणले गर्दा फाउंडेशनले यो कामको लागि माग गर्दछ २०2050० सम्म प्रतिलिपि अधिकार अन्तर्गत रहनुहोस्.
भन्नुभयो अखबार द्वारा विश्लेषण गरिएको थियो मिन्ना बेकर, एक सुलेख विशेषज्ञ, जसले पुष्टि गरे कि अखबारको सबै लेखन एकै हातको हो। तर यो पछि, पत्र प्रामाणिक कथाहरू जुन एनी फ्रान्कले बच्चाको रूपमा लेखेका थिए साथीहरू (यी अमेरिकामा प्रकाशित गरियो)। Lयी अक्षरहरूको हस्तलेखनमा १० वा १२ बर्षे सानी केटीको सामान्य उपस्थिति हुन्छ, "मूल हस्तलिपि" भन्दा धेरै फरक हुन्छ, जसको हस्तलेखन धेरै पाको व्यक्तिबाट हो।
त्यसोभए वास्तवमा कसले लेख्यो "अना फ्रान्कको डायरी"? केटी उनी आफैं थिएनन् किनभने उनीहरूले हामीलाई बेचिरहेको छ? के मानिसहरू यति क्रूर छन् कि पुस्तक बेचेर उनीहरूलाई वास्तविक र गैर-काल्पनिक पीडा उचित हुन्छ कि १२ वर्षीया केटीले, सयौं हजारौंलाई, ती यातना शिविरहरूमा सताए? हुन सक्छ…
(8 डी julio de 1942) - आमा भ्यान दान घर गएको छ कि हामी भोली, हाम्रो लुक्ने ठाउँबाट बाँच्न सक्छौं कि भनेर हेर्न। भान डान हाम्रो साथ त्यहाँ लुक्नेछ। हामी सात हुनेछौं। हाम्रो सुत्ने कोठामा, मार्गोटले मलाई भन्यो कि सम्मन बुबाको लागि थिएन तर आफ्नै लागि हो। फेरि डराए, म रुन थाले। मार्गोट सोह्र वर्षको भयो। त्यसोभए उनीहरू आफ्नो उमेरका केटीहरूलाई एक्लै जान दिन चाहन्छन्! भाग्यवस, आमाले भनेजस्तै, ऊ जानेछैन।
(19 को नोभेम्बर 1942) हामी यी सबै दु: खमा आँखा बन्द गर्न सक्दछौं, तर हामी ती मानिसहरूलाई विचार गर्छौं जसले हामीलाई माया गर्छन्, र जसका लागि हामी सबैभन्दा खराबसँग डराउँछौं, उनीहरूलाई मद्दत नगरीकन। मेरो न्यानो ओछ्यानमा म अरूलाई भन्दा कम महसुस गर्दछु जब म साथीहरूलाई भन्दा धेरै मन पराउँछु, उनीहरूको घरबाट उखेलिन्छ र यस नरकमा खस्दछु। मलाई डर लाग्दो छ कि मेरो नजिकको मान्छेहरू अहिले संसारमा सबैभन्दा क्रुर कार्यान्वयनकर्ताको हातमा छन्। तिनीहरू यहूदी हुन् भन्ने एक मात्र कारणको लागि।
(5 को जनवरी 1944) प्रिय किट्टी: मलाई के हुन्छ मलाई अचम्म लाग्दछ: मेरो शरीरमा दृश्य परिवर्तनहरू मात्र होइन, तर म भित्र के भइरहेको छ। म यी चीजहरूको बारेमा कसैसँग कहिले पनि बोल्दिन, त्यसैले मैले तिनीहरूलाई तपाईंसँग भन्नु पर्छ। प्रत्येक चोटि मेरो अवधिमा केवल तीन पटक हो - मलाई धेरै कोमल गोप्य राख्ने भावना छ, पीडा र असुविधाको बावजुद। यसैले यद्यपि यो एक तस्विर हो, म यो रहस्य दोहोर्याउन चाहन्छु। यहाँ आउनु भन्दा पहिले मैले अनजानमै त्यस्तै अनुभूति अनुभव गरें, किनकि मलाई साथीको घरमा रात बिताउने सम्झना छ, मलाई उनको चुम्बन गर्ने अपार इच्छा थियो, जुन मैले पक्कै गरें। म उनको शरीर को बारे मा धेरै जिज्ञासु थियो, जुन मैले कहिल्यै देखेको थिइन। हाम्रो मित्रताको प्रमाणको रूपमा, मैले उनलाई एक अर्काको स्तनहरू महसुस गर्न भने, तर उनले इन्कार गरिन। प्रत्येक चोटि मँ ना naked्गो महिलाको छवि देख्छु, उदाहरण को लागी, भेनस, म उत्साहित छु। उनी मलाई असाध्यै राम्री देखिन्छिन् कि यो मेरो आँसु रोक्न गाह्रो छ। यदि केवल मेरो साथी छ भने!
एनी फ्रान्कको कथा (फिल्म)
यदि तपाईंलाई सिनेमा मनपर्दछ भने, तपाईं यहाँ केटीको जीवनको बारेमा बनेको फिल्म हेर्न सक्नुहुनेछ:
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » किताबहरु » «एनी फ्रान्कको डायरी the पुस्तकसँग विवादहरू
फ्रान्सिस्को जिमनेज (@ फ्रान्सिसन) भन्यो
त्यहाँ मानिसहरु छन् जो सार्वभौमिक हुनु पर्छ, र आना हो।
फ्रान्सिस्को जिमनेज (@ फ्रान्किसन) लाई जवाफ दिनुहोस्
अन्नी फ्रान्कलाई शंका गर्नेहरू ईर्ष्यालु छन् किनकि उस्तै पढाइले एक जना केटीको भावना जस्तो देखिन्छ जुन एक मानिस उसको यौनिकताका बारे कुरा गरिरहेको छ। अज्ञानी एनी फ्रान्क लेखक हुन्
Landon लाई जवाफ दिनुहोस्
यस विवादास्पदको बारेमा थाहा पाउनु भन्दा अघि मैले यस पत्रिका पढें। जब मैले यो पढें, म सहयोग गर्न सक्दिन तर सोच्न सक्छु कि यो डायरी, त्यो अभिव्यक्तिको त्यस्तो तरीका, सोच्ने तरिका, १ 13 र १ 15 वर्षबीचको केटी सामान्य थिएन।
यद्यपि शुरुमा मैले यसलाई अनुवादमा श्रेय दिएँ तर त्यहाँ बिरालो लक थियो भन्ने धारणा सधैं मसँगै रह्यो।
किताबको बारेमा सोच्नेलाई अज्ञानी भन्नु ठीक होइन। प्रत्येक पुस्तकले भावनाहरू छोड्छ र लेखकको बारेमा सोचिएको छ। कहिलेकाहीँ हामी कथा वा कथामा मात्र केन्द्रित हुँदैनौं।
तपाईलाई पढ्नु पर्ने उत्तम स्टोरीबुक
साहित्यिक चरित्र जुन वास्तविक जीवनमा अवस्थित थिए